वास्ता - (काल्पनिक) व्यंगात्मक कथा - Lekhapadhi प्रेरणादायी कथा Must Read : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी २३ पुष २०७८, शुक्रबार ११:२० मा प्रकाशित
बन्द पसलबाहिर दुई जना बूढा मानिसहरु आपसमा कुरा गरिरहेका थिए र हाँसिरहेका थिए । एकजना यात्रु त्यहाँबाट गुज्रिरहेका थिए ।
उनीहरु यति खुसी हुनुको कारण सोधे । एकजना बूढाले सकिनसकी आफ्नो हाँसो रोक्दै भने–“हाम्रो देशको समस्या समाधान गर्ने एउटा शानदार योजना छ ।”
यात्रुले साेधे – त्यस्ताे के याेजना हाे र ?
उनले भने – “सबै..लाई जेलमा हाल्ने र त्यससँगै गधालाई पनि जेलमा हाल्ने योजना छ ।”
बाटोमा हिड्नेले अचम्म मानेर दुवैलाई हेरे र सोधे- ‘गधालाई किन ती सबैसँगै कैदमा राख्नुपर्छ?
यो सुनेर दुवै बुढा जोरले हाँस्न थाले । एकजनाले अर्को बुढालाई भने- ‘हेर, अब त मेरो कुरामा पत्यार लाग्याे हाेला, हाेइन त ! मैले भनेँ यहाँ मान्छेको बारेमा कसैले सोध्दैन, सबैले गधाको मात्रै वास्ता गर्नेछन् ।
यो काल्पनिक व्यंग्य हो, यसको वास्तविकतासँग कुनै सम्बन्ध छैन।